Komee Paartileen Mormituu Oromoo dhiyeeffatan DHDUOn dhara jedha
Bitootessa 11, 2015
Paartii Kongiresa Biyyoolessaa Oromoo Obbo Tolasaa Tasfaayeen hoogganamu dabalee Paartiileen Oromiyaa keessa socha’anii fi dambii Naamusa Filannoo bara 2002 tumame mallatteessan ja’a Paartii aangoo Mootummaa harkaa qabu Dhabbata Dimookiraatawa Uummata Oromoo yokaan DHDUO wajjiin walitti-dhufuu dhaan, Mana-maree ijaarrachuun waliin hojjetaa turan.
Amma garuu, “Manichi-maree hundeeffane akka danbicha tumametti hojjetaa hin jiru.” jechuudhaan, yeroof itti hirmaachuu dhaabanii jiran. “Paartiileen ja’anuu yoo haga torban tokkootti gaaffiileen keenya deebii hin arganne – hirmaannaa keenya akka dhaabnu beeksisnee jirra.” jedhu Obbo Tolasa Tasfaayee.
DHDUO bakka-bu’uudhaan kanneen Mana-maree paartiileetti hirmaatan keessaa tokko ka ta’an Obbo MOGES IDA’EE garuu, “Paartii Obbo Tolasaafaa fi Paartii ka biraa tokko irraa kan hafe walga’ii Kaleessa geggeessinetti hirmaatanii jiru” jedhu.
Gaaffii fi deebii geggeedffame kutaa 1ffaa armaan gaditti caqasaa